ကြည့်ရှုသူတိုင်း ရင်ခုန်သံတွေ ဝုန်းဒိုင်းကြဲသွားလောက်အောင် အရမ်းကိုမိမိုက်လွန်းနေတဲ့ ချောကလျာရဲ့ အလန်းစားဗီဒီယိုလေး – Cele Cupid
ကြည့်ရှုသူတိုင်း ရင်ခုန်သံတွေ ဝုန်းဒိုင်းကြဲသွားလောက်အောင် အရမ်းကိုမိမိုက်လွန်းနေတဲ့ ချောကလျာရဲ့ အလန်းစားဗီဒီယိုလေး
EverBest M | May 30, 2021 | Celebrity | No Comments
ယခု အခါ မှာ တော့ ချောကလျာ ရဲ့ အလန်း စား ပုံလေး နဲ့ tik tok ဆော့ ထား တဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင် ကို တင်ပေး လာတာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် … . ။ သူမ က တော့ ဆက်ဆီ ကျကျ ရိုက် ထား တဲ့ လန်း လွန်း တဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယို လေး ကို ကြိုက် နှစ်သက် မယ်လို့ ယုံကြည့် ပါ တယ် နော် … . ။ ချောကလျာ ရဲ့ ဗီဒီယို လေး ကို ပရိတ် သတ် တွေ အတွက် ပြန် လည် မျှဝေ ပေး လိုက် တယ် နော် … . ။
အမိုက် စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ တက်သစ်စ မော်ဒယ်လ် ချောကလျာ ကို သိကြ မယ် ထင်ပါ တယ် နော် … . ။ မော်ဒယ်လ် လော က ကို ဝင် ရောက် တာ မကြာသေး ပေမယ့် ပရိသတ် အများ အပြား ရဲ့ အားပေး ဝန်းရံ မှု ကို တ ဖြည်းဖြည်း ရရှိလာ တဲ့ မော်ဒယ်လ် ဖြစ်ပါ တယ် … . ။ ယောကျာ်းလေး ပရိသတ် တွေ ရဲ့ ဝန်းရံ အားပေး မှု ရရှိထားတဲ့ သူမ က တော့ ဆိုရှယ် media လောက မှာ နာမည် တစ်လုံးနဲ့ ရပ် တည်နေ သူ တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါ တယ် … . ။
သူမ ရဲ့ ဆက်ဆီ ကျ ပြီး အမိုက်စား ပုံ တွေ နဲ့ ညို့ အား ပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင် နိုင် သူလေး ဖြစ် တာ ကြောင့် လက်ရှိ ဖေ့ဘွတ် စာ မျက်နှာ မှာ ရေပန်းစား လူကြိုက် များ ကာ ပုရိသ တွေ ဝန်းရံ နေကြ တာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် … . ။ သူမ ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ် တွေ ကို လူမှု ကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ် ပေါ် တွင် အများဆုံး တင်လေ့ ရှိ တာ တွေ့ ရပါ တယ် … . ။
crd … .
ယခု အခါ မွာ ေတာ့ ေခ်ာကလ်ာ ရဲ့ အလန္း စား ပုံေလး နဲ႔ tik tok ေဆာ့ ထား တဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင္ ကို တင္ေပး လာတာ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ … . ။ သူမ က ေတာ့ ဆက္ဆီ က်က် ရိုက္ ထား တဲ့ လန္း လြန္း တဲ့ အမိုက္စား ဗီဒီယို ေလး ကို ႀကိဳက္ ႏွစ္သက္ မယ္လို႔ ယုံၾကည့္ ပါ တယ္ ေနာ္ … . ။ ေခ်ာကလ်ာ ရဲ့ ဗီဒီယို ေလး ကို ပရိတ္ သတ္ ေတြ အတြက္ ျပန္ လည္ မၽွေဝ ေပး လိုက္ တယ္ ေနာ္ … . ။
အမိုက္ စား ခႏၶာကိုယ္ ေကာက္ေၾကာင္း အလွ ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ တက္သစ္စ ေမာ္ဒယ္လ္ ေခ်ာကလ်ာ ကို သိၾက မယ္ ထင္ပါ တယ္ ေနာ္ … . ။ ေမာ္ဒယ္လ္ ေလာ က ကို ဝင္ ေရာက္ တာ မၾကာေသး ေပမယ့္ ပရိသတ္ အမ်ား အျပား ရဲ့ အားေပး ဝန္းရံ မႈ ကို တ ျဖည္းျဖည္း ရရွိလာ တဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ ျဖစ္ပါ တယ္ … . ။ ေယာက်ာ္းေလး ပရိသတ္ ေတြ ရဲ့ ဝန္းရံ အားေပး မႈ ရရွိထားတဲ့ သူမ က ေတာ့ ဆိုရွယ္ media ေလာက မွာ နာမည္ တစ္လုံးနဲ႔ ရပ္ တည္ေန သူ တစ္ေယာက္ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ … . ။
သူမ ရဲ့ ဆက္ဆီ က် ၿပီး အမိုက္စား ပုံ ေတြ နဲ႔ ညိဳ႕ အား ျပင္းျပင္း ဆြဲေဆာင္ နိုင္ သူေလး ျဖစ္ တာ ေၾကာင့္ လက္ရွိ ေဖ့ဘြတ္ စာ မ်က္ႏွာ မွာ ေရပန္းစား လူႀကိဳက္ မ်ား ကာ ပုရိသ ေတြ ဝန္းရံ ေနၾက တာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ … . ။ သူမ ရဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ ေတြ ကို လူမႈ ကြန္ယက္ ေဖ့ဘြတ္ ေပၚ တြင္ အမ်ားဆုံး တင္ေလ့ ရွိ တာ ေတြ႕ ရပါ တယ္ … . ။
ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ ဆန်းသစ်တဲ့ အနုပညာဖန်တီးမှုကြောင့် သူမကိုယ်သူမ မမှတ်မိတော့လောက်အောင် အံ့သြဖွယ် ပုံစံအသစ်နဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
ပုရိသ တို့ ရင်ခုန်သွားအောင် ကိုယ်လုံးလေးလှုပ်ပြီး အသည်းယားစရာ ကပြထားတဲ့ ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့ ဗွီဒီယိုလေး